एक युवा कोठा सजाने को लागी चार कुञ्जी | सजाउनुहोस्
एक युवा कोठा को सजावट को लागी चार कुञ्जीहरु
मारिया vazquez | 08/08/2021 10:00 | शयनकक्षहरू
कोठा एक बन्छ कान्छो को लागी शरण, एक ठाउँ उनीहरु विरलै घरमा छोड्न चाहन्छन्। आफ्नो कोठा मा उनीहरु आराम, अध्ययन, संगीत सुन्ने र अन्य गतिविधिहरु को बीच, उनीहरुका साथीहरु संग भेट्न। यही कारण हो कि एक युवा कोठा को सजावट महत्वपूर्ण छ, किनकि यो ठाउँ, आकर्षक हुनुको अतिरिक्त, ती सबै आवश्यकताहरु लाई कभर गर्नु पर्छ।
हामी यो कसरी गर्छौं? हामी कसरी कोठा सजायौं ताकि यो तपाइँको आवश्यकताहरु को प्रत्येक को लागी कार्यात्मक छ? Decoora मा आज हामी तपाइँलाई चार कुञ्जीहरु संग प्रदान गर्दछौं युवा कोठा सजावट टाउको दुखाई नबन्नुहोस्। हामी महत्त्वपूर्ण रंग, फर्नीचर र सामान को बारे मा कुरा गर्छौं।
4 अतिरिक्त सीटहरु
आधार सेतो को रूप मा एक तटस्थ रंग को उपयोग एक महान छनौट हो, विशेष गरी सानो बेडरूम मा, तर यो एक मात्र उज्यालो बेडरूम प्राप्त गर्न को लागी रंग छैन। ग्रे एक धेरै वर्तमान रंग हो र यसको हल्का टोन मा यो सेतो को रूप मा एक समान भूमिका खेल्न सक्छ। यसको अतिरिक्त, यो रंगहरु मध्ये एक हो युवाहरु लाई सबैभन्दा धेरै सराहना गरीएको छ आफ्नो कोठा सजाउन को लागी।
दुबै खैरो र सेतो रंग हो, यो पनि धेरै आभारी छ, कि हामीलाई सीमित गर्दैन जब यो रंग को नोटहरु लाई शामिल गर्न को लागी आउँछ। हामी उनीहरु संग जोड्न सक्छौं गाढा ग्रे, ब्लूज र कालो, र thatहरु कि राम्रो संग प्रयोग गरीन्छ हामीलाई एक बेडरूम मा गहिराई बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि जब एक पर्खाल मा लागू गरीन्छ उनीहरु नेत्रहीन यसलाई पछाडि धकेल्ने गर्दछन्? तिनीहरू यस प्रकार धेरै लामो कोठाहरु लाई सन्तुलन गर्न को लागी एक धेरै रोचक संसाधन बन्छ।
तर हामी दुबै खैरो र सेतो रंगहरु संग संयोजन गर्न सक्छौं कि बेडरूम को लागी रंग को नोटहरु प्रदान गर्दछ पहेंलो, सुन्तला, गुलाबी वा हरियो। पहिलो दुई कोठा मा न्यानोपन जोड्नुहोस्, काठ को फर्नीचर को रूप मा, विशेष गरी ती बेडरूम मा सेतो र खैरो वातावरण सन्तुलन को लागी दुर्व्यवहार गरीएकोमा रोचक छ।
La अध्ययन क्षेत्र एक युवा कोठा को सजावट मा एक अग्रणी भूमिका लिन्छ। ती युगहरु मा यो एक हुनु आवश्यक छ गृहकार्य गर्न डेस्क र परीक्षा को लागी अध्ययन। यसबाहेक, यदि तपाइँ केहि दराज र शेल्फ डेस्क को छेउमा राख्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाइँ किताबहरु र अध्ययन सामग्री भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ, सेट धेरै अधिक कार्यात्मक हुनेछ।
यदि तपाइँसँग धेरै सीमित ठाउँ छ, एक अनुकूलित काठ को सतह यो सबै उपलब्ध ठाउँ को लाभ लिन को लागी सबै भन्दा राम्रो समाधान हुन सक्छ। अनुकूलन समाधान एक सानो अवसर वा एक सानो गरीब बाहिर राखिएको कोठा को अधिकतम गर्न को लागी एक महान अवसर हो, र एक कस्टम काठ टेबलटप एक ठूलो परिव्यय को आवश्यकता छैन।
शेल्फ डेस्क को छेउमा वा यो मा राख्न सकिन्छ। यो 25cm भन्दा ठूलो गहिराई को लागी आवश्यक छैन। किताबहरु र फोल्डरहरु संगठित गर्न सक्षम हुन। र यदि ठाउँaको लागी सीमित छ डेस्क अन्तर्गत दराज को छाती, तपाइँ सधैं उनीहरुलाई अग्लो बन्द मोड्युल संग प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
बच्चाहरु र युवा बेडरूम मा अर्को धेरै आवर्ती विकल्प हो छिद्रित प्यानलहरु। यदि हामीसँग पर्याप्त कोठरी र बन्द भण्डारण समाधान छ, हामी छिद्रित प्यानलहरु संग डेस्क को पर्खाल रंग गर्न सक्छौं कि कान्छो सजीलै आफ्नो रुचि अनुसार अनुकूलित गर्न सक्छौं। यो सधैं तपाइँको ठाउँ को लागी एक व्यक्तिगत स्पर्श दिन को लागी आवश्यक छ।
एक किशोर को भण्डारण आवश्यकताहरु सामान्यतया महान छन् र यो हो यो सुनिश्चित गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि सबै कुरा को आफ्नो स्थान छ। यो सजीलो ठाउँ सफा रहन को लागी बनाउनेछ तर यो ग्यारेन्टी गर्दैन; एक युवा बेडरूम को मामला मा यो धेरै भनिएको छ, तर कोसिस गर्न को लागी होइन।
एक सानो युवा कोठा मा यो verticality को सहारा को लागी आवश्यक हुनेछ। भुइँ देखि छत क्याबिनेट उनीहरु महान सहयोगीहरु बन्नेछन् र मोड्युलर भण्डारण समाधान यी को लागी एक सही पूरक हो। तपाइँ उनीहरुलाई डेस्क मा, ओछ्यान मा राख्न सक्नुहुन्छ।
को तल्लो ड्रयरको साथ उठाइएको ओछ्यान उनीहरु एक युवा बेडरूम को भण्डारण ठाउँ अधिकतम गर्न को लागी अर्को महान समाधान हो। उनीहरु त्यो ठाडोपन को फाइदा लिन्छन् जसको बारे मा हामी पहिले बोल्थ्यौं र हामीलाई कम्बल, किताबहरु, टेक्नोलोजी उपकरणहरु वा कपडाहरु लाई भण्डारण गर्न को लागी आवश्यक ठाउँ प्रदान गर्दछौं। र हो, उनीहरु पाहुनाहरु को लागी एक दोस्रो ओछ्यान को समायोजित गर्न सक्छन्।
अर्को तरीका छ कि अतिरिक्त भण्डारण ठाउँ प्राप्त गर्न को लागी हो एक उठाएको संरचना बनाउनुहोस् कोठा को भाग मा। एक अनुकूलन संरचना कि ठूलो दराज शामिल छ। उच्च छत, अधिक खेल्न यो संरचना तपाइँ र अधिक तत्वहरु यो एकीकृत गर्न सक्नुहुन्छ।
Poufs सधैं युवा कोठा मा स्वागत छ। उनीहरु न केवल संगीत सुन्न वा पढ्न को लागी एक ठाउँ संग प्रदान गर्दछन्, तर उनीहरु पनि प्रतिनिधित्व गर्दछन् अतिरिक्त सीट जब तपाइँका साथीहरु भेला हुन्छन्। र, जस्तै कि हामीले पहिले नै भन्यौं, घरमा एक किशोरको जीवन उसको कोठामा हुन्छ।
थोरै कठोर poufs कि एक साइड टेबल को रूप मा सेवा आदर्श हो यदि ठाउँ सीमित छ र तपाइँ उनीहरु लाई एक रात को ध्यान को रूप मा सेवा गर्न चाहानुहुन्छ। तर उनीहरु सबैभन्दा धेरै हुन् ठूलो र backrest संग सबैभन्दा सहज भुइँमा "झुटो" हुन।
के यी कुञ्जीहरु एक युवा कोठा को सजावट को लागी उपयोगी भएको छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » शयनकक्षहरू » एक युवा कोठा को सजावट को लागी चार कुञ्जीहरु
कसरी तपाइँको घर गन्ध राम्रो बनाउन को लागी
Microcement को लाभ